कोरियामा ईपिएस कामदारलाई कम्पनीमा चोटपटक लागेमा के गर्ने ? :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
कोरियामा ईपिएस कामदारलाई कम्पनीमा चोटपटक लागेमा के गर्ने ?
दक्षिण कोरियामा खासगरि कल कारखानामा काम गर्दा हातमा चोटपटक लागेर हातका औंला तथा हात नै गुमाउनु पर्ने समस्याबाट थुप्रै कामदारहरु पिडित रहेका छन् । कतिपय कामदारहरुको मृत्यु समेत हुन गएको छ । कोरियामा विभिन्न् कल कारखाना तथा कृषिमा काम गर्दा दुर्घटनामा परेर उपचार गराउनु पर्दा ठूलो रकम खर्च हुने हनाले त्यसतो समयमा के गर्ने भन्ने बिषयमा कामदारहरुका जानकारीका लागि यो लेख तयार गरेको छ, ।
(१). कम्पनीमा काम गर्दा कुनै पनि चोटपटक लागेमा वा कम्पनीको कारणले गर्दा बिरामी परेमा तुरुन्त नजिकको अस्पतालमा उपचार गराउन जाने । दुर्घटनाको सम्पूर्ण विवरण सहित आफनो एलियन रजिष्ट्रशन कार्ड समेत देखाउने अस्पतालमा देखाउने ।
(२) चार दिन भन्दा बढी अस्पतालमा बसेर उपचार गराउनु परेमा वा अंग भंग हुन गएको अवस्थामा समेत सम्पूर्ण खर्च कामदारले बेहोर्नु पर्दैन । यस्तो उपचारका लागि कोरिया सरकारद्धारा कामदारहरुको क्षतिपूर्ति बीमा (Workers' Compensation Insurance) (सान्जे बोह्म)लागू गरिएको छ । यो बीमाले कामदारको उपचार मात्र होईन क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराउंछ । यसको प्रिमियम वापतको रकम बुझाउनका लागि रोजगारदाता जिम्मेवार हुन्छन् नकि कामदार । अस्पतालबाट प्राप्त कागजातहरु सुरक्षित राख्ने ।
(३) कार्य स्थल (कम्पनीमा) दुर्घटनामा परेर उपचार गर्दा के गर्ने ?
कार्यस्थलमा कुनै दुर्घटनामा परी उपचार गर्दा (Workers' Compensation Insurance) फारम भरेर, चिकित्सा सुविधाको दावी सहित (Workers' Compensation Insurance) का शाखा कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ । यस्ता फारमहरु कोरियाका (Workers' Compensation Insurance) बाट तथा अधिकार प्राप्त अस्पतालहरुमा पनि उपलब्ध रहन्छ । दाबी फारमहरु कतिपय प्रवासी कामदार सहयोग केन्द«मा पनि उपलब्ध हुन सक्छ ।
(४) कामदारहरुको क्षतिपूर्ति बीमा (Workers' Compensation Insurance) कहां लागु हुन्छ ?
कम्तिमा एक जना पनि कामदारले रोजगारी प्राप्त गरेको भएपनि त्यस्तो कार्यस्थलमा यो बीमाद्धारा सबै कामदारलाई सुरक्षित गरिएको हुन्छ । यदि कुनै कामदार दुर्घटना भएको समयमा बीमाद्धारा सुरक्षित नगरिएको स्थानमा रोजगार दिईएको रहेछ भने पनि दुर्घटनाद्धारा असर परेको कामदारले यसका फाईदा प्राप्त गर्न योग्य हुन्छन् । यस बीमाको मुख्य बिशेषता यो छ कि यस बीमाले प्रवासी कामदार तथा कोरियाली कामदारको बीचमा कुनै भेदभाव गर्दैन तथा कामदारको बसाई ग्रैह् कानूनी (अवैधानिक) भएतापनि यस बाट लाभ प्राप्त गर्न सक्दछ । यस सम्बन्धमा ( COMWEL) बाट फोन मार्फत पनि ( फोन नम्बर १५८८(००७५) जानकारी लिन सक्दछ वा ( COMWEL) शाखा कार्यालयमा आफनो सुविधा अनुसार पुगेर पनि जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछ ।
(५) कार्य स्थल दुर्घटनाको फारम भर्दा कुन कुन कागजात बुझाउनु पर्छ ?
कार्य स्थल दुर्घटनाको फारम भर्दा राहदानी, विदेशी दर्ताको प्रमाणपत्र, शुरुमा डाक्टरले जांच गर्दाको राय, दुर्घटनाको साक्षी भए साक्षी तथा विवादास्पद दुर्घटनाका सबुत दिने अन्य कागजातहरु बुझाउनु पर्दछ ।
(६) Workers' Compensation Insurance बाट कुन कुन फाईदाहरु प्राप्त हुन्छ ?
(१)औषधि तथा हेरचाह सम्बन्धी फाइदाहरुः
कार्यस्थलमा भएको दुर्घटना वा कार्यस्थलको कारणले लाग्न गएको रोगको कारणले ध्यचपभचकु Workers' Compensation Insurance बाट अधिकार प्राप्त अस्पतालमा उपचार गराउंदा लागेका औषधी उपचारका खर्चहरु प्राप्त गर्नेछ ।
(२) अस्थायी अपांङ्गता भएमा तलब प्राप्त हुनेः
कार्य सम्बन्धी दुर्घटना वा रोगको कारणले काम नगर्दाको अवस्था निज कामदारको तलब भुक्तानी हुनेछ । ( ७० प्रतिशतमा सिमित)
(३) स्थायी रुपमा अपांग भएमा प्राप्त हुने भत्ता ः
कार्य सम्बन्धी दुर्घटनाको वा रोगको कारणले उपचार कार्य सकिए पछि पनि स्थायी रुपमा अपांग भएको खण्डमा अपांङ्गताको स्तर( १४ किसिमका स्थायी अपाङ्ग स्तर भित्रको हुनु पर्ने) अनुसार भत्ता प्राप्त गर्न सक्दछन् ।
(७) Workers' Compensation Insurance का फाईदाहरुको एकमुष्ट भुक्तानीः
प्रकाशित मिति : २०७३ श्रावण १३ (July 28, 2016)